sosegado : အာလ်ဂျုးနီး(Aljunied)က အသံများ
Posted by sosegado at 1/08/2011 07:06:00 PM
ရင်တမမနဲ့ ဖတ်လိုက်ရတာ..မျက်လုံးကို ပြူးနေတာပဲ..
မမြင်ရ မတွေ့ရဘူး ဆိုပေမဲ့ ဒါတွေ တကယ် ရှိတယ်ဗျ။ ပြီးတော့ ကိုယ်တိုင် မြင်ချင် တွေ့ချင်ရင်လည်း ဖြစ်တာပါပဲ။ အန္တရာယ် ကင်းကင်းနဲ့ ရှင်းရှင်း ဖြစ်သွားလို့ တော်ပါသေးရဲ့။
စင်္ကာပူရောက်ရင် အဲဒီအိမ်မှာ လာတည်းမယ် ... :P ကိုဆိုဆီ။
ကျွန်တော် ရှိနေတယ်ဆိုတာ လက္ခံပါသည်။
ဘလော့ဂ်သရဲ... စီဘောက်စ် သရဲဆိုလို့ နည်းနည်းတောင် ကျောချမ်းသွားတယ်... အဟီး...
မှာနေတဲ့ ဘလော့ဂါတစ်ယောက်ကို တောင်သတိရမိသေး။
အင်း ဖတ်ရင်းနဲ့ ကျောချမ်းလိုက်တာ
ဖေ့ဘွတ်သရဲ၊ ဘလောဂ့်သရဲဆိုလို့ ရယ်မိသေးတယ်
ကိုယ်လည်း ဘလော့ဂ်သရဲဖြစ်မယ် ထင်ပါရဲ့ သေရင်...
လာလည်ပါတယ်.. ဖတ်လို့ကောင်းပါတယ် လို့ အော်သွားမယ်း)
သေတတ်ဘို့အရေးကြီးတယ်၊ မကျွတ်မလွတ်သော သူတွေက နေရာအနုံပါ။
စင်္ကာပူတွင် မကျွတ်မလွတ်တဲ့သူတွေများသည်ဆို၏၊ Min Min
ကျနော်တော့ အဲဒီလိုမျိုး ကူညီပြီးသွားအိပ်ပေးဖို့တော့ မလွယ်ဘူး။
ဒါထက်သရဲက အဖော်လာအိပ်ပေးတဲ့လူတွေကို ကြောက်လို့ အသံတွေပျောက်သွားတာ ထင်တယ်။
သူတို့ခြောက်ရင်လည်း စာမျက်နာပေါ် ရောက်မှာ သိနေတော့ မခြောက်ရဲတာနေမှာဗျ။
အမလေး....ကိုဆိုဆီရေ....အစကနေအဆုံးအထိ ဖတ်သွားလိုက်တာ အသက်တောင်မရှူရဲသလောက်ပဲ။ သရဲသာကြောက်တတ်တာ....သရဲခြောက်တဲ့ဇာတ်လမ်းတော့ စိတ်ဝင်စားသလားမမေးနဲ့....။ :D
တကယ်ရှိတာယုံတယ် အမှန်တော့သရဲကိုကြောက်ပေမဲ့ မြင်လည်းမြင်ဖူးချင်မိတယ်။ ဟီးးးးးးးး
ရင်တမမနဲ့ ဖတ်သွားပါတယ်။ တရားနာ မေတ္တာပို့လိုက်တာ ကျွတ်လွတ်သွားတဲ့ သဘောနဲ့တူတယ်နော်။
အင် တကယ် သရဲလား ? ? ?
City Hall MRT မှာလဲ ကြားဘူးလိုက်တယ်
မေတ်တာပို့ တဲ့သူကို မချောက်ဘူးလို့ပြောခြင်တာလား . . .?
အင်း ဟုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီဘုန်းကြီးတွေ သီလ ရှိလို့ သာ ကျွတ်တာဖြစ်မယ်။
အဟုတ်လား တကယ်လား.. စိတ်စွဲလို့လား...
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဖတ်လို့ ကောင်းတယ်..
ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ တကယ့် သရဲအကြောင်းရေးပါလား …. L
ဖိုးချိုရဲ့ မာလာဆောင်က သရဲလိုဖြစ်နေရင် ဒုက္ခ။ :)
ဖဘသရဲ ဘလော့သရဲ စီဘောက်သရဲ ဂျီတော့ခ်သရဲ ကွန်မန့်သရဲတွေကတော့ ခေတ်သစ် သရဲတွေနေမှာနော်။ အဲဒါဆို ဘလော့ဂါ ဘုန်းကြီးတွေ ခေါ်ပြီး ကမ္မ၀ါ ဖတ်ခိုင်းရမယ်။
အဲ ... ဂျီတော့ခ်သရဲဆိုလို့ ကျမတခါ ကြုံဖူးတာ ရှိသေးတယ်။ ရန်ကုန်မှာတုန်းက ကျမအိမ်ကို အမြဲလာပြီး အင်တာနက်သုံးနေကျ သူငယ်ချင်းတယောက် လူသတ်ခံရလို့ သေသွားပြီးမှ သူကိုင်နေကျ ကွန်ပျူတာမှာ သူ့ဂျီတော့ခ်က အလိုလို ဆိုင်းအင်ဖြစ်ပြီး ၀င်ဝင်နေတယ်။ ဆိုင်းအောက်လုပ်ပြီး စက်ကိုပြန်ပိတ်၊ နောက်တခါ ပြန်ဖွင့်တိုင်း အဲဒီအကောင့်ကြီး ၀င်ဝင်နေတုန်းပဲ။
ခြောက်တာလား ဘာလားတော့ မသိဘူး။ အိပ်မက်လဲ ပေးသေးတယ်။ အီးးး ရေးနေရင်း ကျောချမ်းတယ် ရပ်မှ။
အဟီး ကြောက်စရာကြီး ..။
ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ်ဆိုရင်တော့ မကြောက်ဘူး။ ဒါပေမယ့် တစ်ယောက်ယောက်က ပြောလိုက်လို့ ရှိရင် ကြောက်ပြီး မသွားရဲတော့ဘူး။ ဒါတွေက မမြင်ရပေမယ့် တကယ်ရှိတာ ထင်တာပါဘဲလေ။
လူပျိုတုန်းက ၀ုဒ်လန်း အိမ်မှာနေတုန်း အခန်းမီးကို အတင်းလိုက်ပိတ် တာကြုံဖူးတယ်။ ရှိနိုင်ပါတယ်။